दार्जीलिङमा कार पार्किङको समस्या झेलिरहनु भएको छ? अब नसुर्ताउनुहोस्- यसै महिनादेखि समस्या समाधान हुँदैछः जनवरीदेखि रोहिणामा टोल ट्याक्स बन्द – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsदार्जीलिङमा कार पार्किङको समस्या झेलिरहनु भएको छ? अब नसुर्ताउनुहोस्- यसै महिनादेखि समस्या समाधान हुँदैछः जनवरीदेखि रोहिणामा टोल ट्याक्स बन्द
जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-ले यसै महिनाभित्र दार्जीलिङका नवनिर्मित दुइवटा कार पार्किङको उद्घाटन गर्ने अनि 1 जनवरी 2018-देखि रोहिणीमा टोल ट्याक्स उठाउन पनि बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ।
दार्जीलिङको ट्राफिक समस्या समाधान गर्ने विषय लिएरनै आज जीटीए प्रमुख विनय तामाङले दार्जीलिङ ट्राफिक पुलिस, दार्जीलिङका 53 वटा सिण्डिकेटका प्रतिनिधिहरूसित एक बैठक गरेका थिए, जसमा लामो बहस भएपछि यसै महिनाभित्र लेबोङ कार्ट रोड वा दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयमुनि र काकझोड़ास्थित डीआरसी गोदाम परिसरमा निर्माण भएका बहुतले कार पार्किङको उद्घाटन गर्ने निर्णय लिइएको जीटीएको बोर्ड अफ् एड्मिनिस्ट्रेटर अध्यक्ष विनय तामाङले बताए।
‘दार्जीलिङ शहरमा ट्राफिकको समस्या बढ़िरहेको छ, यसैलाई ध्यानमा राखेर जीटीएले यहाँका सिण्डिकेट साथै ट्राफिक पुलिससित लगातार बैठक गर्दै आइरहेको छ। जसमा यसै महिनाभित्र दार्जीलिङका दुइवटा कार पार्किङको उद्घाटन गर्ने निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने।
यी दुइवटा कार पार्किङमध्ये दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयमुनिको कार पार्किङमा 251 वटा र डीआरसी गोदाममा 120 वटा गाड़ी अट्न सक्छन्। यी दुइवटा कार पार्किङमा लगभग 350 वटा गाड़ी अट्नसके शहरको ट्राफिक समस्या निकै हदसम्म समाधान हुने आशा छ। यी दुइवटा कार पार्किङको उद्घाटन भएपछि कहाँ के गर्नुपर्ने हो, त्यो खुट्याएर आगामी दिनमा आवश्यक पहल गरिने पनि उनले बताए।
यसका साथै कार पार्किङ शुल्कबारे पनि आजको बैठकमा चर्चा-परिचर्चा गरिएको पनि उनले बताए। ज्ञात रहोस्, दार्जीलिङको ट्राफिक समस्यालाई ध्यानमा राखेरनै जीटीएले वर्ष 2013-देखि दार्जीलिङमा दुइवटा, कालेबुङमा एउटा अनि खरसाङमा पनि एउटा बहुतले कार पार्किङ निर्माण गर्न शुरू गरेको थियो। यीमध्ये दार्जीलिङका दुवैवटा कार पार्किङको निर्माण कार्य लगभग पूर्ण भइसकेको छ।
जीटीएले दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयमुनि लगभग 500 वटा गाड़ी अँट्नसक्ने कार पार्किङको निर्माण शुरू गरेको थियो भने काकझोडास्थित डीआरसी गोदाममा पनि लगभग 160 वटा साना गाड़ीका साथै 10 वटा बस अँट्नसक्ने बहुतले कार पार्किङको निर्माण भएको थियो।
दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयमुनि 23 करोड 23 लाख रुपियाँको लागतमा कार पार्किङ निर्माण भएको थियो भने डीआरसी गोदाम परिसरमा 10.70 करोडको लागतमा प्रथम चरणको कार पार्किङ निर्माण भएको थियो। यसबाहेक खरसाङको बाइपास रोड परिसरमा निर्माण भएको5तले कार पार्किङको लागत प्रथम चरणमा 25 करोडको भएको विभागले अघिबाटै जानकारी गराएको थियो। विभागीय योजनाअनुसार, खरसाङमा निर्माण भएको कार पार्किङको सबैभन्दा माथिल्लो तलालाई मार्केट प्लाजाको रूप दिइने भएको थियो, जहाँ लगभग 20 वटा दोकान हुने बताइएको थियो।
यसबाहेक मुनिका3तलामा लगभग 470 वटा साना-ठूला गाड़ी अँटाउने योजना थियो। विभागीय योजनाअनुसार, दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयमुनि निर्माण भइरहेको कार पार्किङमा विशेष यहाँको विशप हाउसदेखि शर्मा ग्यारेजसम्म सड़क किनारमा दिनभरि राखिने गाड़ीहरुका साथै जू-मा आउने पर्यटकहरुलाई लिएर आउने गाड़ीहरुलाई व्यवस्थित गरेर राख्नेछ।
यसरीनै काकझोड़ास्थित डीआरसी गोदाममा निर्माण भएको कार पार्किङमा घूम-जोरबङ्लोतर्फबाट आउने गाड़ीहरुलाई राख्ने योजना बनाइएको छ। यदि यी दुइवटा कार पार्किङमा गाड़ीहरु व्यवस्थित ढंगले राख्न सकिए दार्जीलिङ शहरको ट्राफिक समस्या आधासरो समाधान हुनेछ अनि यहाँका सड़क किनारहरु पनि खुल्ला हुने आशा गरिएको छ। यसरीनै जीटीएले गाड़ी चालक अनि गाड़ी मालिकहरूलाई नयाँ वर्ष 2018-मा टोल ट्याक्समा छूटको उपहार दिने योजना पनि बनाएको छ।
दिसम्बर 2013-देखि जीटीएले रोहिणीमा टोल ट्याक्स उठाउन शुरू गरेको थियो, जसको दर यस्तो छ-निजी वाहन-30 रूपियाँ, ट्याक्सी-10 रूपियाँ, मिनी बस-40 रूपियाँ, पिकअप-20 20 रूपियाँ र ट्रक-30 रूपियाँ छ। यसबारे जीटीए प्रमुख तामाङले भने-टोल ट्याक्सबाट जीटीएलाई वार्षिक 40 करोड़ रूपियाँ प्राप्त भइरहेको छ भने सड़क मरम्मतिको लागि वार्षिक2करोड़ खर्च भइरहेको छ। यसैले 1 जनवरीदेखि टोल ट्याक्सनै उठाउन बन्द गर्ने निर्णय लिइएको हो।